IMacID izohlala itholakala noma ngabe iApple iveza iTouch ID ukuvula iMac yakho | Ngivela kwa-mac
IMacID izohlala itholakala noma ngabe iApple iveza iTouch ID ukuvula iMac yakho
UJesu Arjona Montalvo | | Mac App Store, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Ngikhulume kulezi zinsuku ngamathuba amakhulu okuthi i-Apple izokwethula indlela entsha yokuvula eyakho IMac eneTouch ID ku-a inguqulo elandelayo ye-OS X. Kulabo abazi, lokhu kungenziwa vele ngezicelo ze- App Store, njenge IMacID, kepha uma i-Apple iletha lesi sici ukufakwa komdabu kwe-OS X. Kuzokwenzekani kulezi zicelo ezivela eceleni?.
Akukabikho okwamanje asikho isiqinisekiso ukuthi isici esinjalo siqinisekisiwe ukuthi sizofika kwi-Mac, ngoba akuyona into engaphezu kwe-a amahemuhemu, futhi ngokuthembeka mhlawumbe ngeke sazi ngokuqinisekile kuze kube yiphutha le- I-WWDC 2016, ne-Apple imemezela i-OS X yayo entsha. Ngakolunye uhlangothi, ake sithi ngokuzenzisa i-Apple yethula lesi sici. Kungathinteka kanjani ukufaka izicelo komuntu wesithathu owenza izinto ezifanayo?.
1 IMacID vs Apple
IMacID vs Apple
Yize iningi labantu lizothi lizoqala ukusebenzisa isici se-OS X ne-iOS esakhelwe ngaphakathi kuzinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle ukuvula iMac yabo ngeTouch ID, kusazoba khona ezinye izici ezizokwenza umehluko ngomsebenzi olandelayo wendabuko ongahlanganiswa yi-Apple.
Isibonelo, IMacID engathengwa ku-App Store ye- 3,99 €, inezici eziningi mayelana nekusasa I-ID yokuthinta ezingakhulunywa ngamahemuhemu amanje, nokuthi mhlawumbe ngeke zifakwe kokunye ukusetshenziswa kohlelo ngokwalo I-ID yokuthinta kusuka kumakhompyutha we-Apple for Mac.
Uma i-Apple ingakuvumela ukuthi uvule iMac yakho ngenzwa ye-Touch ID usebenzisa i- ukuxhumeka kwe-bluetooth, futhi uthathe isinqumo sokuyeka ukusebenzisa iMacID ngokuphelele, usazolahlekelwa yizici ezahlukahlukene izinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle ezinjengeMacID okufanele zinikele njenge:
Isebenza ngama-Macs amaningi, amadivayisi we-iOS, ne-Apple Watch ngasikhathi sinye.
Vula i-Mac yakho usebenzisa i-Touch ID, ngephasikhodi, i-Apple Watch, noma nge-Pebble.
Izaziso ezisebenzisanayo ezikwenza ungadingi ngisho nokuvula idivayisi yakho ye-iOS.
Lawula umsindo wakho we-Mac, osebenza nge-iTunes ne-Spotify.
Yikhiqize ngesandla i-Mac yakho, noma qala isilondolozi sesikrini ukude.
Vala ngokuzenzakalela lapho idivayisi ye-iOS isuka kude ne-Mac yakho.
Ukusondela kuyivula ngokuzenzakalela lapho ubuyela ku-Mac yakho.
Thinta izinqamuleli ze-3D.
Iwijethi Esikhungweni Sezaziso.
Khetha kusuka ekuhlanganisweni kombala.
Ngisebenzisa iMacID ukugunyaza imisebenzi edinga iphasiwedi yomlawuli ku-OS X yakho. (Okwe-akhawunti yomlawuli kuphela)
IMacID ye-OS X ayixhumeki kwi-Inthanethi ngaphandle kwemvume yakho.
Iphasiwedi yakho ye-OS X ayikhishwa futhi ayishiyi iMac yakho.
Kuyamangalisa ukuthi kulula ukuyisebenzisa, kepha igcwele izici nezinketho.
Uhlu luzokhombisa ukuthi noma ngabe i-Apple ihlanganisa isici se- Thinta i-ID kuma-Mac akho, kusekhona ithoni yezici ezinhle okufanele zithathwe IMacID, ngoba uhlu olungenhla lukhulu ekusebenzeni.
wakhe izici ezinhle kakhulu ngaphandle kwehaba ngisho nezici ezilula, ne-ID yokuthinta engasetshenziswa yi-Apple ngeke ize nezici eziningi nezilungiselelo zomsebenzisi njenge-MacID.
Ngokuvamile, indlela ejwayelekile ka-Apple ukwenza okuthile okuhlangabezana ne- izindlela zokuzinza nokusetshenziswa kalula. I abasebenzisi abasezingeni eliphakeme abafuna izinketho eziningi ukumisa okuvame ukufana nezici, bashiywe ebumnyameni ngethemba lokuthi Onjiniyela bohlelo lokusebenza bangahlangabezana futhi bahlangabezane nezidingo zakho.
I-ID yokuthinta isebenza kahle, futhi ngicabanga ukuthi i-Apple isiqalile ukungena emandleni ayo. I-ID ye-Touch ingakhishwa kusuka kumadivayisi we-iOS namanye amadivayisi we-Apple ngasikhathi esithile, kepha izinsizakalo ezivela eceleni zingaholela ekuqinisekiseni okungcono uthole umuzwa omuhle kakhulu womsebenzisi.
para Kane unjiniyela we-MacID, akusikho ukuphela komhlaba kohlelo lwakho lokusebenza, ngoba namanje hlela ukuqhubeka nokuxhasa ngezici ezintsha, noma ngabe i-Apple iletha lezi zici kwi-Mac ku-new I-OS X 10.2.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » IMacID izohlala itholakala noma ngabe iApple iveza iTouch ID ukuvula iMac yakho
I-Apple ingaletha iMacBook Pro entsha ngeTouch ID ne-touch bar ngesikrini se-OLED
Isitolo sokuqala se-Apple eBrooklyn Siqinisekiswe Izicelo Zomsebenzi We-Apple